Liiska xiddigaha ku tartami doona abaal-marinta laacibka bisha Janaayo ugu fiicnaa horyaalka Premier Legaue oo lagu dhawaaqay – Gool FM
Liiska xiddigaha ku tartami doona abaal-marinta laacibka bisha Janaayo ugu fiicnaa horyaalka Premier Legaue oo lagu dhawaaqay
(London) 31 Jan 2020. Waxaa la shaaciyey liiska xiddigaha ku tartami doona abaal-marinta laacibka bisha Janaayo ugu fiinaa horyaalka Premier League, waxaana hoggaaminaya Aguero, Henderson, Alisson & Grealish.
Todobada ciyaaryahan ee u sharraxan xiddiga ugu fiicnaa bisha Janaayo horyaalka Premier League ayaa lagu dhawaaqay goordhow, waxaana halkaan hoose idin kugu soo gudbinaynaa laacib waliba iyo waxqabadkii uu ka sameeyey Premier League bisha maanta ku eg ee Janaayo.
3 Kulan ayuu ciyaaray, 2 Guul 1 Barbaro, wax guuldarro ahna lama kulmin, waxaana uu dhaliyey lix gool isagoo caawiye ka ahaa gool kale.
Aguero ayaa noqday gooldhaliyaha ugu sarreeya taariikhda Premier League xiddigaha ajaaniibta ah ee ka ciyaara England waxa uu saddexleey ka dhaliyey Aston Villa, ka hor inta uusan saddex gool dhalin kulamadii ay wajahday Man City kooxaha Crystal Palace iyo Sheffield United.
5 kulan ayuu ciyaaray, Shantaas kulan waa uu guuleystay, iyadoo uusan barbaro gelin wax guuldarro ahna aan la kulmin, waxaana uu goolhayaha shabaqiisa gool ka ilaashaday 4 kulan.
Shanta kulan oo uu ciyaaray goolhaye Alisson afar kulan oo ka mid ah gool lagama dhalin, waxaana uu caawiye ka ahaa goolkii uu Mohamed Salah markiisii ugu horreysay ka dhaliyey Manchester United, sidoo kale badbaadinno cajiib ah ayuu sameeyey kulankii ay 2-1 kaga adkaadeen Wolverhampton Wanderers intii lagu guda jiray bishaas.
4 Kulan ayuu ciyaaray, labo ka mid ah kulamadaas guul ayuu gaaray, hal kulan barbaro kulanka kalena waa laga adkaaday, labo gool ayuu dhaiyey muddadaas waxaana uu caawiyey gool kale.
Doucoure ayaa bandhig cajiib ah sameeyey kulankii kooxdiisa Watford ay 3-0 uga adkaatay AFC Bournemouth, waxaana uu dhaliyey gool isagoo mid kalena cawiye ka ahaa, sidoo kale waxa uu gool dhaliyey kulankii ay guusha ka gaareen Wolves, laacibkan khadka dhexe ayaana Hornets ka caawiyey inay helaan todoba dhibcood.
4 Kulan ayuu ciyaaray, labo ka mid ah kulamadaas guul ayuu gaaray, hal kulan barbaro, kulanka kalena waa laga adkaaday, labo gool ayuuna dhaiyey muddadaas.
Grealish ayaa labo gool dhaliyey, goolka hore waxa uu ka dhaliyey ciyaartii ay 2-1 uga adkaadeen Burnley, ka hor inta uusan goolka barbaraha ka dhalin Brighton & Hove Albion, kabtanka Villa ayaana sidoo kale kooxda ka caawiyey inay garaacdo Watford kaddib bandhig cajiib ah oo uu sameeyey inkastoo uusan gool dhalin kulankaas.
5 kulan ayuu ciyaaray, Shantaas kulan waa uu guuleystay, iyadoo uusan barbaro gelin, wax guuldarro ahna aan la kulmin, waxa uu dhaliyey hal gool isagoo caawiye ka ahaa gool kale.
Henderson ayaa isagoo kabtan u ah Liverpool ku hoggaamiyey shan guul oo xiriir ah intii lagu guda jiray bisha Janaayo, isagoo shaqo fiican ka qabtay qadka dhexe ee garoonka, waxa uu gool ka dhaliyey mid kale ku caawiyey kulankii ay 2-1 kaga adkaadeen Wolves.
4 Kulan ayuu ciyaaray, labo ka mid ah kulamadaas guul ayuu gaaray, wax barbaro ah ma gelin, labada kulan ee kalena waa laga adkaaday, saddex gool ayuu dhaliyey halka gool kale uu caawiye ka ahaa.
Weeraryahanka kooxda Leicester City ayaa gool dhaliyey mid kalena caawiyey kulankii ay guusha ka gaareen kooxdiisii hore ee Newcastle United, labo gool oo soo daahayna waxa uu ka dhaliyey West Ham United.
4 Kulan ayuu ciyaaray, saddex ka mid ah kulamadaas guul ayuu gaaray, wax barbaro ah ma gelin, kulanka kalena waa laga adkaaday, labo caawin ayuu sameeyey isagoo labo kulan shabaqiisa gool ka ilaashaday.
Daafacan dhexe ee Southampton ayaa shabaqiisa gool ka ilaashaday kulammadii ay la kala ciyaareen Tottenham Hotspur iyo Crystal Palace waxaana uu sameeyey labo caawin labadaas kulan, isagoo sidoo kale qeyb muhiim ah ku lahaa guushii ay ka gaareen Leicester City.
Bruno Fernandes lambarkee ayuu u xiran doonaa Manchester United?, xilli la xaqiijiyey haddii uu ka mid noqonayo xiddigaha wajahaya Wolves